Soomaaliya, 01 February 2018
Wareysi Gaar Ah: Sanbaloolshe oo Ka Hadlay Arrimo Dhowr Ah
Agaasimihii hore ee hay'adda nabad-sugidda Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa dhalliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee looga guulaystay kursigiisii hore ee baarlamaanka.
Somaliland oo Dowladda Soomaaliya Kala Hadashay Wadahadalladii Hakaday
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliland Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladdii hakadka galay ee labada dhinac iyo xisadda ka taagan Tukarraq.
Laba ka tirsan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud, ayaa ku dhintay qarax haleelay gaari ay la socdeen, kaas oo maanta ka dhacay duleedka Muqdisho.
Kenya: Maxkamad Hakisay Xayiraad War-baahinta Qaar Lagu Soo Rogey
Maxkamadda Saree ee Kenya ayaa soo saartay go’aan ay ku joojineyso xayiraad ay dowladda ku soo rogtay saddex telefishin oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee gaarka loo leeyahay dalka Kenya.
Dib u Dhac ku Yimid Dalaggii Beeraha ee Baay
Ku dhawaad sanad ka dib, markii Soomaaliya ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo dhinaca abaarta ah, ayaa waxaa muuqata in cabsidii laga qabay in abaartaa ay macluul isu beddesho laga baaqsaay, inkastoo abaartii weli ay taagan tahay.
Magaalada Kismaayo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xarigga xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi, oo lagu magacaabo, Axmed Xassan Cabdi, kaas oo qaar ka tirsan xildhibaannadu ay sheegeen in xasaanaddii baarlamaanka laga qaaday.
Dhageyso Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybtii 406-aad
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani, waxaa si aad uga barateenba soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaajaa, waana qeybtii 406-aad.
RW Kheyre oo Ku Baaqay Maal-gashiga Beeraha
Warbixin: Xaaladda Dadka Juudaanka Qaba ee Soomaaliya
Boqollaal Soomaali ah ayaa qaba cudurka Juudaanka oo aan weli laga dabar goynin, inkastoo dhaqaatiirtu ay dhinaca kale sheegeen in si dhib yar loo daaweyn karo.
Qoraa Naciimo Qorane oo Maalintii 4-aad Hargeysa ku Xiran
Naciimo Abwaan Qorane oo ka mid ah hal-abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed, ayaa maalintii 4-aad ku xiran magaalada Hargeysa, kadib markii ciidamada Somaliland ay ka xireen garoonka Hargeysa xilli ay u safreysay magaalada Muqdisho.
Wareysi : W/Dibadda Soomaaliya, Md. Axmed Ciise Cawad
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo wafdigiisii ka qeyb galay shirkii madaxda Afrika ee Addis Ababa, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho.